SAMOTALIS: 26-ka Juun Waa Maalinta Qarannimada Soomaliland: Ahmed Arwo
26-ka Juun Waa Maalinta Qarannimada Soomaliland: Ahmed Arwo
Waa qarannimo 55tan jirsatay, waa da' kolka loo eego cimriga aadmiga laakiin waa shabaab kolka loo eego cimriga dawladaha. Maanta waxa inala gudboon inaynu qiimeheeda siino, walow ay jiraan duruufo aynu ku kala qaybsanay oo ka dhashay gaabis siiyaasi oo dhammaan aynu ka mas'uul nahay mucaarid iyo muxaafidba. Eedda ugu weyna ay leeyihiin Golaha Wakiilada ee shacbiga matalo oo noqday gaabis guntii. Waa Golaha ku fadhiya Sharciga dib u eegidda qaybsiga kuraasta Golaha Wakiilada oon la'aanteed aan la helayn doorasho xor oo xalaal ah. Intaas u dhaafimaayo oo ma rabo inay damaashaadka inaga leexiso iyo maalintii aynu dalkeena ka xorreynay gumeysi aan diin iyo dhaqan iyo midab midna inala wadaagin ee aynu ku luuqaynaynay: waa ayaantii maaloodigii meesha daran ka yimid aynu ka dhoofinay dalkeena Soomaliland. Maalin farxaddu ina mideysay.
Labels: AHMED ARWO, HISTORY, Maqaalada Ahmed Arwo, NEWS, Somaliland